Global Voices teny Malagasy » Ekoatera: #LoxaEsMas, Tolo-kevitra Mitondra Fiovàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Jolay 2012 3:06 GMT 1	 · Mpanoratra Alison Martinez Nandika (en) i Jen Fumero, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Amerika Latina, Ekoatora, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka
Loja  [en] dia tanàna ao atsinanan'ny faritanin'i Loja  [en], atsimon'i Ekoatera. Izy no renivohitry ny fileovana  sy ny faritanin'i Loja. Miaraka amin'ny mponina eo ho eo amin'ny 200.000 dia malaza amin'ny asa-tànana ny tanàna, noho izany, fantatra ihany koa amin'ny hoe : “renivohitry ny Kolontsaina sy Zavakanton'i Ekoatora” izy.
Ao amin'ny bilaoginy manokana, Carlos Correa , izay tompon'ity hevitra ity dia manamafy :
Nanohina ahy ny nahita ny fihemoran'ny tanàna amin'ny sehatra maro. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nanoratra lahatsoratra iray aho : Piensa, Loxa, piensa!  (saino, Loja, saino), dia nisy valiny tsotra avy amin'ny mpamaky : angamba ilaina ny fiaraha-mitondra ny singa rehetra hanaovana piozila lehibe iray. Tamin'izay fotoana izay, tsapako fa ny tambajotra sosialy dia fitaovam-piadiana matanjaka hahatratrarana io, ny fampiasana ny Facebook sy Twitter araka ny tokony ho izy dia zavatra hafa noho ny fampakarana sarin-tsaka kely na ny labiera nosotrointsika halina.
Ny hetsika voalohan'ny LoxaEsMas dia ny “Twit Callejero” (“Tweet eny an-dàlam-be”), “ Ahoana no hitantaranao an'i Loja amin'ny litera 140 ? ” Io hevitra io dia eritreretina fa hampiely ny feon'ny vahoaka amin'ny fampiasany ny tweet-ny miaraka amin'ny soso-keviny mba hanatsarana an'i Loja.
Hisy fomba fifidianana iray ao amin'ny tranonkalan'i LoxaEsMas  izay hahitàna ny fanehoan-kevitra avy amin'ny tweet rehetra. Ny mpampiasa twitter dia afaka mifidy tweet dimy tsara indrindra amin'ny fanindriany ny bokotra “Tiako”. Ny 29 Jona, fetra farany hanaovana ny fifidianana, ireo tweets tsara indrindra izay voafidy dia havoaka an-taratasy sy haparitaka eran'ny tanàna. Ankoatra izay, hisy fivoriana karakaraina miaraka amin'ny ben'ny tanàn'i Loja, Jorge Bailon, mba hampisehoana ny tweet rehetra nandray anjara.
Pablo Andrés Duque (@pabloaduquec ) dia miteny amin'ny mponina ao Loja :
Cesar Jaramillo (@cesarvolter ) dia manoratra hoe :
#LoxaEsMás  Raha mijery ireo mason-janako aho dia tanàna iray mendrika sy sambatra no tiako ho hita ao amin'izy ireo.
Gianella Carrion (@GianeCarrionS ) dia mahalala ny hatsaran'i Loja ary miantso ny olona hifantoka amin'io lohahevitra io
#LoxaEsMás  dia tanàna ara-kolontsaina, harena sarobidin'i Ekoaterantsika, fotoana izao hitafiantsika ny akanjon'ny ekipantsika ary hiadiantsika ho an'i Loja malalantsika.
Ho fampahafantarana bebe kokoa ity hetsika ity sy ireo tweet s tahaka itony dia azo jerena ny tranonkalan'i Twit Callejero , Azo arahana ao amin'ny Twitter (@loxaesmas ) ihany koa izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/07/05/34721/
 faritanin'i : http://en.wikipedia.org/wiki/Loja_Province
 Ahoana no hitantaranao an'i Loja amin'ny litera 140 ?: http://loxaesmas.org/2012/06/08/twit-callejero.html